समाचार Archives - Like For Nepal
May282022 by fornepalNo Comments
काठमाडौँ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले धाँधली गरेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता । केपी शर्मा ‌ओलीले ‘धारेहात लगाउनु बेठीक’ भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी । हुने क्रममा दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा कमीकमजोरी भएका छन् भने समीक्षा गर्नुपर्ने तर प्रतिपक्षी दलका नेताले भनेजस्तो धाँधली नभएको बताए । पराजित भएपछिको अभिव्यक्ति ओलीले दिएको उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तह निर्वाचन मूलभूत रूपमा सफल भएको छ । हामी सबै सहभागी भएको निर्वाचन मतगणना हुँदै जाँदा, मतपरिणाम आउँदै गर्दा पराजित भएपछि सरकारमाथि धारेहात लगाउने विल्कुल बेठीक छ,’ उनले भने । दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारको हस्तक्षेप भएको र धाँधली गरेको भन्ने कुरा निर्वाचन अवधिमा किन नउठाएको भनेर पनि प्रश्न गरे ...
काठमाडौँ । तत्कालीन मालेका संस्थापक मध्येका एक नेता वामदेब गौतम पछिल्लो समय गुमनाम छन्। उनी आजभोलि के गर्दै छन् भन्ने चासो विषय बनेको छ। आजभोलि गौतमको दिनचर्या कसरी बितेको छरु उनी किन राजनीतिबाट ओझेल परेरु राजनीतिमा चासोे राख्नेहरुका लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ। मुलुकको गृह प्रशासन पटक–पटक सम्हालेका गौतम राजनीतिक क्रियाकलापले बारम्बार विवादमा आइरहने पात्र हुन्। उनकै अस्थिर र ढुलमुले स्वभावको कारण नेकपा बिभाजन भएको आरोपसमेत कतिपय नेताहरुले लगाउने गर्दछन्।कुनै बेलाका शक्तिशाली यी नेता आजभोलि एक्लिएका छन्। उनलाई ०५४ सालमा साथ दिएका पुर्नगठित मालेका नेताहरुसमेत उनीसँग छैनन्। राजनीतिमा एक्लो बृहस्पति जस्तै देखिएका वामदेव अरु नेतालाई चुनावको चटारो हुदाँ उनी भने गुमनाम छन्। केही समय अगाडि उनले पार्टी खोल्न लागेको भन्ने हल्ला समेत चलेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै...
May252022 by fornepalNo Comments
हेटौंडा। नेकपा एमाले मकवानपुरका निवर्तमान अध्यक्ष बद्रीप्रसाद लम्सालले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट अलग हुने घोषणा गरेका छन्। सामजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै लम्सालले आफ्नो गाउँपालिकामा समेत पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा विजयी गराउन । नसकेको भन्दै नैतिकरुपमा पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा बस्नु उपयुक्त नभएको भन्दै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन्। लम्सालले सामजिक सञ्जालमा पाँच बुँदे कारण उल्लेख गरेर नैतिकताको आधारमा पार्टीको कुनैपनि जिम्मेवारीमा नरहने उल्लेख गरेका छन्। लम्सालको पाँच बुँदे धारणा:१. विगत २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म पनि पार्टी नेतृत्व संसदीय क्षेत्र र राजकीय क्षेत्रमा निश्चित व्यक्तिहरूको मात्र नेतृत्व रहनु स्वायत्त र मौलिक ढंगले काम गर्नसक्ने । नयाँलाई आउनै नदिने, अवसरहरू हस्तान्तरण गर्नैपरे आफ्नो नियन्त्रणमा चल्नेलाई मात्र ल्याउने,...
काठमाडौं । नेकपा एमालेले स्थानी तहको निर्वाचनमा ठूलो झट्का व्यहोरेको छ। त्यो झट्का पार्टी विभाजनका कारणले पनि लागेको हो। एमाले विभाजनपछि ३० वर्षदेखिका किल्लाहरु भत्किएका छन् । खासगरी बुटवल, धरान, इटहरी, हेटौडा, विदुर दमक लगायतका शहरी इलाकाहरु एमालेले गुमाएको छ । केही उपनगरपालिका र नगरपालिकाबाहेक एमालेलाई घाटा लागेको छ । मतान्तरण अवस्था फराकिलो नभएको र एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगको गठबन्धनले सत्ता साझेदार दललाई फाइदा भएको देखिन्छ भने एमालेलाई घाटा भएको छ । ६ वटामध्ये कुनै पनि महानगरपालिकामा एमालेले जित निकाल्न सकेन । कम्तीमा दुई वटा महानगर जित्ने अपेक्षा राखेको एमालेलाई यसपल्ट पार्टी विभाजनले ठूलै घाटा भएको छ । एमालेबाट विभाजित भएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले एमालेकै उम्मेदवारलाई पराजित गरेका पनि छन् । रौतहटको गौरमा एकीकृत समाजवादीका उम्...
काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम नतिजा अन्तिमतिर पुगेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मंगलबार मध्यान्हसम्म ७५३ मध्ये ७४० स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। जसअनुसार ३२२ स्थानीय तहमा विजयी भएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले २०२ स्थानीय तह जितेर दोस्रो ठूलो दलमा खुम्चिएको छ। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा २९४ स्थानीय तहमा विजयी भएको एमाले देशको पहिलो दल बनेको थियो। गत निर्वाचनमा तेस्रो भएको सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र यसपटक पनि १२१ तहमा जित निकालेर तेस्रो नै भएको छ। अर्को सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल ३० स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आफूलाई चौथो ठूलो दल बनाउन सफल भएको छ। जसपाबाट चोइटिएको समूहले गठन गरेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल १५ तह जित...
एमाले पुनर्मिलनको तयारि: एमालेमै फर्किदै झलनाथ खनाल, मिति समेत तोकियो !
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा २ पटकसम्म विघटन भएपछि झलनाथ खनाल तत्कालिन नेकपा हुँदा माधव नेपाल–प्रचण्ड कित्तामा उभिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो । पार्टी एकताअघिकै अवस्थामा दुबै पार्टी फर्किएपनि नेकपा एमालेभित्रको विवाद साम्य हुन सकेन । अन्ततः माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मियो । खनाल पनि त्यतैतिर लागे । पछिल्लो समय भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अध्यक्ष माधव नेपालसँग असन्तुष्ट रहेका छन् । एमसीसी परियोजना पास गर्ने बेलादेखि नै खनाल अध्यक्ष नेपालसँग रुष्ट बन्दै आएका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि खनालले नेपाली कांग्रेसलगायत दलसँग तालमेले गर्दा आफूहरुले धोका पाउने बताउँदै आए । तर, माधव नेपालकै जोडबलमा चुनावी तालमेल भयो । खनाल चुनावको माहोल सकिन । नपाउँदै कांग्रेसबाट धोका भए...
मतगणना स्थल छोडेर भाग्यो एमाले, खोज्दै निर्वाचन कार्यालय
काठमाडौँ । पोखरा महानगरका दुई वडामा पुनःमतगणना सुरु नहुँदासम्म बाँकी मतगणनामा नबस्ने एमालेले अडान लिएको छ । पोखराका दई वडामा पुनःमतगणनाको माग गर्दै एमालेका प्रतिनिधि मतगणनास्थल प्रवेश गरेका छैनन् । मतगणनाको अन्तिममा कुल मतसंख्या र मुचुल्कामा उल्लेख भएको संख्याभन्दा कम मतपत्र देखिएको भन्दै पुन: मतगणनाको माग गर्दै एमालेका प्रतिनिधी मतगणना स्थलबाट छोडेका हुन् । पोखराका दुई वडामा मुचूल्कामा उल्लेख भएको भन्दा मतपेटिकामा भएको मतपत्र कम देखिएपछि एमालेले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको । कार्यालयमा निवेदन बुझाएको थियो । वडा १८ र ३१ को पुनः मतगणना गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माले निवेदन दिएका हुन् । उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ नहुँदासम्म बाँकी मतगणनामा सहभागी नहुने एमाले महानगर समिति सचिव जीवन आचार्यले बताए । पोखराका ३३ मध्ये हाल वडा २२, ३२ र ३३ को मतग...
May242022 by fornepalNo Comments
हेटौंडा। नेकपा एमाले मकवानपुरका निवर्तमान अध्यक्ष बद्रीप्रसाद लम्सालले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट अलग हुने घोषणा गरेका छन्। सामजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै लम्सालले आफ्नो गाउँपालिकामा समेत पार्टीको तर्फबाट । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा विजयी गराउन नसकेको भन्दै नैतिकरुपमा पार्टीको कुनै पनि । जिम्मेवारीमा बस्नु उपयुक्त नभएको भन्दै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन्। लम्सालले सामजिक सञ्जालमा पाँच बुँदे कारण उल्लेख गरेर नैतिकताको आधारमा पार्टीको कुनैपनि जिम्मेवारीमा नरहने उल्लेख गरेका छन्। लम्सालको पाँच बुँदे धारणा: १. विगत २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म पनि पार्टी नेतृत्व संसदीय क्षेत्र र राजकीय क्षेत्रमा निश्चित । व्यक्तिहरूको मात्र नेतृत्व रहनु स्वायत्त र मौलिक ढंगले काम गर्नसक्ने नयाँलाई आउनै नदिने, अवसरहरू । हस्तान्तरण गर्नैपरे आफ्नो नियन्त्रणमा चल्नेलाई ...
अब एमालेमा पहिरो जान्छ, योग्य र इमान्दार नेता-कार्यकर्ता हाम्रो पार्टीमा आउदैछन् :माधव नेपाल
काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको । सम्भावना नरहेको बताएका छन् । उनले एकता चाहनेलाई नेकपा एसमा आउन आग्रह गरे । उहाँहरु एकता चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीमा स्वागत छ, तर केपी ओलीसँग हामीले एकता गर्ने प्रश्नै । छैन,’ माधव नेपालले दृष्टि साप्ताहिकसँग गरेको कुराकानीमा भनिएको छ,‘यसमा कसैले भ्रम नपाले हुन्छ । एमालेमा रहेका योग्य र इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा आएमा स्वागत गरिने नेपालको भनाई छ । उनले गठबन्धन तोड्ने पक्षमा नभएको बताए । अहिलेको कमी कमजोरीलाई सुधारेर आगामी चुनावमा गठबन्धन बनाएरै जानुपर्ने बताए । मुलुकमा संविधानको रक्षा, प्रगतिशील रुपान्तरणको बाधक शक्तिलाई परास्त नगरी गठबन्धनको कार्यभार पूरा नहुने नेपालको भनाई छ । उनले भने,‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सं...
ओलीलाई अर्को झड्का: एमालेको आस छैन भन्दै यी केन्द्रिय सदस्य माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ मा एमालेका क्रियाशील सदस्यहरूले पार्टी परित्याग गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा नम्बर–१८ मा अध्यक्ष एमाले र ४ सदस्यमा कांग्रेसले जितेपछि असन्तुष्ट भएर पार्टी छाड्न थालेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री मानबहादुर सुनार र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य तथा राष्ट्रिय । भूमि आयोग जिल्ला अध्यक्ष देवेन्द्र ढुंगाना, प्रदेश कमिटी सदस्य कौशल्या ओझा, भीमदत्त नगर अध्यक्ष अशोक चन्द । र वडा कमिटी अध्यक्ष गंगा दत्त जोशीले प्रवासीलाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए। लामो समय एमालेमा क्रियाशील भएर काम गर्दै गर्दा अहिलेसम्म एमालेले आफूहरूको कुनै कुरा सम्बोधन नगरेकोले भन्दै पार्टी परित्याग गरेको गजेन्द्र सुनारले बताए। पक्राउ परेकाले खुलाए ‘गोरे’ समूहको संलग्नता त्रिभुवन अन्तर्रा...